Laoka sy biskoitra, amin’ny voanjo
Ilaina ny mihinana sakafo misy menaka natoray. Isan’ireo sakafo mitondra izany singa izany ny voanjo ary maro ireo sakafo azo karakaraina aminy.
· Sira 1 tsongo
· Atody 1
· Sucre grains 200g
Amboarina aloha ny “pate à choux”
1. Maka vilany kely iray hamanana ny ronono, ny rano, ny sira sy ny dibera efa notetehina efamira
2. Ampangotrahina dia esorina eo ambony afo
3. Arotsaka indray mandeha ny lafarinina dia haroina mba hahazoana paty miraikitra tsara
4. Averina kely eo ambony afo aloha nyvilany no sady haroina ihany
5. Esorina eo ambony afo amin’izay ary avela hangatsiakakely aloha
6. Kapohina ny atody
7. Arotsaka tsikelikely ao anatin’ilay paty ny atody
8. Mandrarakakely dia haroina ary tandremana tsara satria raha vao lasa mitsiranoka ilay paty dia efa tsy mety intsony.
9. Ampidirina anaty “poche à douille” ny paty dia velarina eo amin’ny lasitra arak’izay endrika hitiavana azy
Ho fanaingoana azy
1. Kapohina ny atody dia asiana sira 1 tsongo. Hosorana io atody io, amin’ny pinceau ny paty tsirairay
2. Rarahina sucre grains, esorinaizay mihoatra dia hampidirina anaty lafaoro amin’izay.
3. Andrahoina mandritra ny 15 min eo ho eo amin’ny hafanana 170°C. Avela hangatsiaka vao hanina.